Faritra Atsinanana: Mikendry ny hampahombiazana ny taom-piasana 2020 ny Governora RAFIDISON Richard Théodore
mercredi, 15 juillet 2020 08:16
Fanamby ho an'ny Faritra Atsinanana, ny hampifanidran-dàlana ireo asan'ny Fitaleavana sy Sampandraharaha tsirairay amin'ireo vinan'ny Fitondram-panjakana (Politique Générale de l'État, Plan d'Émergence pour Madagascar...).
Ny Service Régional de l'économie et du Plan moa no miantoka ny famenoan'ny antonta-taratasy fanaraha-maso sy fanaovana tatitra isaky ny enim-bolana (STD, canevas), io ilay "Système Régional Intégré de Suivi-Évaluation na SRISE".
Fanambin'ny Governoran'ny Faritra Atsinanana, RAFIDISON Richard Théodore, amin'ity enim-bolana faharoa ity ny hametraka fomba fiasa vaovao, ka hanangana vovonana hampiharana ny SRISE, ka tsy tokony hisy fitaleavana na sampan-draharaha intsony ho tara amin'ny fandefasana ny tatitry ny asa vita na "rapports d'activités".
Izany dia ahitana mandrakariva ny fandrosoan'ny asa vita, araka ny vina napetraka sy ny vola lany amin'izany.
Entitra ny Governora amin'ny fahadiovan'ny fitantanana eto amin'ny Faritra Atsinanana.